Ny mpandika ny HomePod dia naneho ny atitany tena notsorina | Avy amin'ny mac aho
Ny homePod izay manome be dia be horesahina dia tsy tsiambaratelon'ny tsirairay ary satria hatramin'ny nametrahan'ny Apple ity mpandahateny vaovao ity dia maro ireo olona niresaka momba azy io, na ho tsara kokoa, ho ratsy kokoa, hamakafaka azy, vaky. midina sa misy hetsika iray hafa izay mety hanome vaovao momba ity vokatra Apple vaovao ity.
Ny iray amin'ireo zavatra nahasarika ny saiko indrindra dia ny fahavakisan'ny tranokala iFixit malaza. Tamin'ny andro nametrahan'i Apple azy amidy dia nahita ny fahatapahan-kevitsika nahita fa sarotra ny mahazo miditra ao anatiny.
Apple dia namolavola boaty manokana tena tsara HomePod Ary izany ve mba hahafahanao miditra ao anatiny dia mila manimba ara-bakiteny ny casing ianao. Izy io dia encapsulation izay nametahana ny ankamaroan'ny sombin-javatra ary, vokatr'izany, tsy azo esorina toy ny mpino mpanaraka maro izy ireo.
Ao amin'ny iFixit dia tsy maintsy notapahin'izy ireo ny tranga hahafahany miditra ao anatiny ary hahatsapa ny fomba nizaran'i Apple ireo singa anatiny. Eto no tiako hampifantoka ity lahatsoratra ity. Apple, tamin'ny fampisehoana nataony, dia naneho fandikan-teny vitsivitsy izay ahitantsika mazava tsara ny ao anaty amin'ilay mpandahateny. Ny sary nasehon'izy ireo no lohatenin'ity lahatsoratra ity. Inona no nahagaga ahy nahita fa tsy dia tsara tarehy toy ny nandoko anay izy ireo ary ny ankamaroan'ny ampahany dia mifatotra amin'ny varingarina plastika. Ny mikrô dia apetaka amin'ilay trano, mamela lavaka kely amin'ny rindrina ary ireo mpibitsika dia tsy misy vokatra mivantana fa ny feony dia alefa mankany amin'ny faritra ambany amin'ilay mpandahateny.
Indray mandeha indray, hitantsika ny hery tokony homena mba hampisehoana ny tombotsoan'ny vokatra iray, raha ny tena izy, dia mila miezaka mafy ianao mba hahafahanao mahita zavatra mitovy amin'izany. Ahoana ny hevitrao momba ny lalàm-panorenan'ny HomePod ao anatiny?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Ny mpandika ny HomePod dia nanisy atitany tena notsorina
Mario boccaccio dia hoy izy:
Ho an'i Pedro Andriamanitra, zahao kely ireo lahatsoratra alohan'ny hamoahana azy ireo. Ny habetsaky ny lesoka sy ny teny diso tsipelina dia tsy mamela anao hamaky ny lahatsoratra amin'ny fomba milamina. Fiarahabana avy any Panama.
Valiny tamin'i Mario Boccaccio
Misaotra Mario, nisy lesoka tamin'ilay volavolan-dalàna. voavaha